hurongwa: Every time a player plays a minimum of £10 (kana zvimwe mari yakaenzana) on across Jungle Spirit: Call of the Wild™ will receive 1* kupinda tikiti kune mubayiro SWEDERA. * Chete mutambi anogona kuwana vaifanira kuti 50 mubayiro SWEDERA matikiti pazuva.
Mubayiro SWEDERA anofanira chete kuitwa kamwe. If the winning Player cannot be contacted successfully notwithstanding Agency’s or the Operator’s attempts the prize award may be declared void at NetEnt’s discretion, matambudziko icho mubayiro haifaniri dzinounzwa chero mukwikwidzi.
4fung – 500fung £12.75
The cash prizes are worth £8,500 and will be shared amongst 500 vakundi.
Chero mari chokuita mitero uchava Player kuti basa.
opareta mumwe nomumwe kuhwina mutambi / s vari kuzivisa mutambi uye kubhadhara mari mubayiro kuna mutambi nhoroondo.
Cash mibayiro Haazovi wagering zvinodiwa. Vatambi vanogona kutora mibayiro pakarepo vanofanira kuita kudaro.
Kuti kuverenga shoma wagering zvinodiwa kana vasiri EUR mari, NetEnt achashandisa shoma bheji pamusoro Kukodzera mitambo zvisinei mari uye zviri vagotendeuka pakati pousiku pakupera pazuva Promo rokutanga maererano Bi date yokuchengetera zvinhu.
NetEnt achaita dzosera mari mibayiro maererano netsika ataurwa pamusoro apa, asi mudzoke (kushandisa avhareji yomwedzi nomwedzi prices) munzvimbo invoicing mari yaiwanzoshandiswa.
Terms uye mamiriro kushandisa Mari muiti